Mahad Karatay oo kula dardaarmay ciidamada Shabaab in ay qaraxyada badiyaan… – Hagaag.com
Mahad Karatay oo kula dardaarmay ciidamada Shabaab in ay qaraxyada badiyaan…
Xilli Shabaab dagaal adag ay kula jiraan Ciidamada dowladda Federalka Somalia & kuwa Amisom, ayaa Sarkaal Sare oo Shabaab ka tirsan wuxuu kula dardaarmay Ciidamada Shabaab inay badiyaan falalka isqarxinta ah.
Mahad Warsame Abuu C/raxmaan oo loo yaqaan Mahad Karatay, kana mid ah Saraakiisha Shabaab ayaa farriin uu soo diray wuxuu ku dardaarmay in Ciidamada Shabaab ay kordhiyaan qaraxyada Miinada & midka isqarxinta ah ee Kooxda la eegtaan Dowladda & Amisom.
Wuxuu sheegay dhinacyada ay dagaalka kula jiraan inay halis badan ku tahay miinada loo dhigo & isqarxinta lala beegsado, sidaasi awgeedna loo baahan yahay in la kordhiyo.
“Fariinta 1aad waxey ku socotaa Mujaahidiinta waxaan ugu dardaarmayaa nafteyda iyo naftooduba cabsida Allaah iyo inaad Cadowgiisa naafeysaan weeraradana aad u joogteysaan, Kamiinada xiriirisaan,dhiiga walaalihiina Muslimiintana aad si adag uga taxadartaan, waa god Naareed ee ha sahlanina, Jihaadkeenuna waxaa waajib nagu ah inaan ka illaalino Guluwiga iyo Irjaaga. Waxaad ku dadaashaan camaliyaatka Istish-haadiga, naftiinana uga sheekeeya waxaadna ogaataan inay san jirin wax cadowga uga daran Camaliyaatka Istish-haadiga iyo Qaraxyada Miinada ee qaraxyada u laba-laaba oo laaya, midey ku qaraxdo iyo mid ku qarwa ka dhiga.” Ayuu yiri Mahad Warsame.